समाज बदल्ने पहिलो सूत्र : तपाईं बदलिने कि ?
लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार कमल रिजाल धार्मिक संस्कार र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
समाज बदल्ने कुरा सबै गर्छन् । प्रायः राजनीतिक वृत्तमा बढी सुनिन्छ यो । नेताहरू बढी गर्छन् यस्ता कुरा । धर्म गुरूहरू र समाज सुधारकहरू पनि अछुत छैनन् यसबाट ।
धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि यस्तै सन्देश पाइन्छ । तर बदल्न भने कसैले पनि सकेका छैनन् । यसका लागि पहिले आफै बदलिनुपर्छ भने आफूलाई बदल्न पहिले आफैंलाई चिन्नुपर्छ । त्यसपछि कहाँबाट आइएको हो र किन आइएको हो भन्ने कुराको खोजी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।
हामी महाकालको त्यो हिस्सा हौं, जसले हामीलाई लिएर आएको छ । यो हमेशा ३ भागमा विभक्त भएर रहेको हुन्छ, जसलाई हामीले भूत, भविष्य र वर्तमान भन्ने गरेका छौं । हामी यसैभित्र छौं । यसैभित्र नै हामीले आफू बदल्ने सूत्र भेट्टाउन सक्छौं । यो भनेको कहाँबाट आएको हौं ? को हौं ? किन आएका हौं ? भन्ने नै हो ।
भूतले कहाँबाट आएका हौं भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ, वर्तमानले को हौं भन्ने र भविष्यले किन आएका हौंं भन्ने कुराको । आउनुुस् आजको बसाइमा यिनै ३ सूत्रलाई केलाउने प्रयास गरौं ।
वस्तुतः आफू कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म कसैले पनि प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् । सोध्ने हो भने प्रायः सबैले आमाको गर्भबाट वा प्रजनन् इन्द्रियबाट भन्लान् सायद । हदै भए बुवाको शरीरबाटसम्म भन्न सक्लान् । तर त्यो मात्र होइन हाम्रो स्रोत । हो, हामी आएका त्यहीँबाट हो । तर यो रूपमा मात्र हो, सारमा होइन ।
सारमा भन्ने हो भने हाम्रो स्रोत ततीतको गर्भ हो । महाकालले कहाँबाट ल्यायो त्यो उसैले जान्ने कुरा हो । तर हामीले जानेको यही हो कि महाकालको एउटा हिस्सा हो, जसलाई हामीले भूत भन्ने गरेका छौं । हुन त कतिपय दार्शनिकले त्योभन्दा अघिको कुरा पनि गरेका छन् । तर त्यो विशुद्ध कल्पना मात्र हो । उनीहरूको विचार हो, सिद्धान्त हो, जसले हामीलाई घुमाइरहेको छ । हामी आफैं नजागेसम्म यो क्रम जारी नै रहनेछ । हामी घुमिरहने छौं उनीहरू घुमाइरहने छन् ।
संसारमा अनेक वाद छन् । सिद्धान्त छन् । पूर्वको सिद्धान्त, पश्चिमको सिद्धान्त, दक्षिणको सिद्धान्त, उत्तरको सिद्धान्त के–के हो के–के । शास्त्र धेरै छन् आयू छोटो छ । हजारौं वर्ष खोजे पनि शास्त्रको अन्त्य भेटिन्न भन्ने गरेका छन् शास्त्रहरूले नै । त्यसैले उनीहरूको पछि लागेसम्म हामी घुमिरहन्छौं उनीहरू घुमाइरहन्छन् । तर आफ्नै स्रोत भने भेट्ने छैनौं । अहिलेलाई यति भनौं हामी महाकालको गर्भबाट आएका हौं । त्यहाँ कसले ल्यायो त्यो चाहिँ उसैलाई छाडिदिउँ ।
अब लागौं हामी को हौं भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नेतर्फ । वास्तवमा हामी हामी नै हौं । म मै हुँ, तपाईं तपाईं नै । न म तपाईं हुन सक्छु, न तपाई म हुन सक्नुहुन्छ । कतिपय दार्शनिकले हामी सबै एउटै हौ भनेका पनि छन् । धर्मशास्त्रमा पनि यही भनिएको छ । गीताले यसै भनेको छ । ब्रह्मसूत्रले यसै भनेको छ । पूर्वीय दर्शनले यही भनेको छ, पश्चिमी दर्शनले पनि यही भनेको होला शायद । तर साँच्चै भन्ने हो भने यो भ्रम मात्र हो ।
जतिबेलासम्म हामी यो भ्रममा रहन्छौं, त्यतिबेलासम्म यतै घुमिरहने छौं । हामी बदलिन सक्दैनौं । जब आफैं बदलिन सकेका छैनौं भने समाज बदल्ने कसरी ? संविधान बदलेला, कानून बदलेला, शासनसत्ता बदलेला, सत्ताधारी बदलेलान् । तर समाज बदलिने छैन । समाज त्यतिबेला बदलिन्छ, जतिबेला संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज तथा खानपान र रहनसहन बदल्न सकिएको छ । यसका लागि हामीले आफूलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो भए हामी को हौं त ? तपाईं तपाईं नै हो । बुवाआमा, दाजुभाई, दिदीबहिनी, घरपरिवार छरछिमेकी तपाईं होइन । तपाईलाई खान, बस्न, रुन, हाँस्न, त्याग्न, हिँड्न, बोल्न, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ममता कसैले सिकाएको होइन, आफैं सिक्नुभएको हो । बुवाआमा, घर, परिवार सबै निमित्त मात्र हुन् । तपाईं तपाईं नै हो । तपाईंलाई कसैले ल्याएको पनि होइन, कसैले ल्याउँछु भनेर आउनुभएको पनि होइन । फेरि तपाई आफंैले दरखास्त दिएर आउनुभएको पनि होइन । आफैं आउनुभएको हो । सारमा यही बुझ्नुस् महाकालको गर्भबाट तपाईं आफैं आउनुभएको हो ।
तपाईं महाकालको अंश हुनुहुन्छ । त्यसैले महाकाल नै हुनुहुन्छ । हिजो पनि महाकाल नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि महाकाल नै हुनुहुन्छ र पछि पनि महाकाल नै हुनुहुन्छ । तपाईंको परिचय यही नै हो ।
अब आयो किन आयौं भन्ने कुरा । उत्तर सरल छ, तपाईं आफैं आउनुभएको हो भने तपाईं आउनुभएको पनि आफैंलाई हो । तपाईंको दायित्व आमाबुवा, घरपरिवार तथा समाजप्रति पनि छ । किनकि सहयोगी उनीहरू नै हुन् । तर त्योभन्दा बढी दायित्व तपाईंको आफैंप्रति छ । त्यसैले पहिलो माया आफ्नै शरीरलाई गर्नुस् ।
आहारबिहार सुधार्नुस् । ठीक्क खाने, ठीक समयमा खाने, ठीक समयमा सुत्ने र उठ्ने गर्नुस् । आयुर्वेदले हितभुक, मितभुक र रीतभुक भनेको छ । योगी बन्न केही गर्र्नै पर्दैन । खानपान, आहारबिहार र विचार सुधारे पुग्छ । योगी बन्नुस्, स्वस्थ हुनुस्, निरोगी रहनुस् । अनि तपाईंलाई सहयोग गर्नेहरूप्रति इमान्दार हुनुुस् यही नै किन आयौं भन्ने प्रश्नको सरल उत्तर हो ।
महाकालले तपाईंलाई हावा, पानी, माटो, आकाश, जमिन, वनजंगल, घरपरिवार, करकुटुम्ब छिमेकी आदि उपहारको रूपमा दिएको छ । तर यो तपाईंलाई मात्र होइन, अरुलाई पनि दिएको छ । यो तपाईंको त हो तर तपाईको मात्र होइन । महाकालले तपाईंजस्तै अरुलाई पनि ल्याएको छ, उनीहरूलाई पनि तपाईंलाई जस्तै उपहार दिएको छ । त्यसैले यिनको सदुपयोग गर्नुस् । संरक्षण गर्नुस् । चाहिने जति लिनुस् । नचाहिने जति जस्ताको तस्तै छाडिदिनुस्, जसको उपभोग अरुले गर्नेछन् ।
तपाईंलाई महाकालले न चाहिनेभन्दा बढी लिने छुट दिएको छ, न बिगार्ने अधिकार नै । अन्यथा उसले रिसाएर दण्डित गर्नेछ । त्यसैले आफूलाई सन्तुलित राख्नु पनि पर्छ र आफ्नालाई सन्तुलनमा रहन दिनु पनि पर्छ । यसपछि केही गर्नै पर्दैन । समाज बदलिन्छ । धर्ती स्वर्ग बन्छ । यहीँबाट स्वर्गीय सुख पाइन्छ । यही नै समाज बदल्ने सूत्र हो ।
गौतम बुद्धको यो कुराले १ सेकेण्डमै बनाउने छ तपाईल...
जाडो याममा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता ८ काम, बिराम...
पछाडिको गोजीमा पर्स राख्दा लाग्न सक्छ यो गम्भीर रोग
आँखाको तेज बढाउनका लागि गर्नुस् यस्तो अभ्यास
प्रधानमन्त्रीको लहडका भरमा संसद् विघटन गरियो, यसलाई बदर गरियोस्– अधिवक्ता भट्ट
लोकतन्त्र बचाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आयो– रामचन्द्र पौडेल
सर्वोच्चमा रिट निवेदकको जिकिर– 'यो संसद् मात्र होइन संविधानकै विघटन हो'
नर्वेमा कोभिडविरुद्ध फाइजरको खोप लगाएका २९ जनाको मृत्यु
महाभारत फिल्ममा कर्ण बन्दैछन् शाहिद कपूर
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्चमा शुरू भयो सुनुवाइ
एनआइसी एशिया लघुवित्तको तेश्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ : मुख्यमन्त्री राउत
बुटवल–नारायणगढ खण्डमा सास्ती : साढे २ घण्टाको बाटो ८ घण्टामा पार गर्न मुस्किल !